Horudhac: Kooxaha Horseed vs Heegan… (Kulanka Ciidanka oo galabta ka dhacaya garoonka Eng Yariisow) – Gool FM
Horudhac: Manchester United vs Sheffield United… (Red Devils oo garoonka Old Trafford ku soo dhoweynaysa kooxda ugu hooseysa horyaalka)
Horudhac: Chelsea vs Wolverhampton Wanderers… (Macallinka cusub ee Blues, Thomas Tuchel oo shaqadiisa ka bilaabaya inuu wajaho Wolves)
Man City oo hoggaanka u qabatay horyaalka Premier League, kaddib markii ay guul raaxo leh ka soo heshay West Bromwich… +SAWIRRO
Arsenal oo guul ay u qalantay ka soo gaartay kooxda Southampton oo ay ku booqatay… +SAWIRRO
Horudhac: Kooxaha Horseed vs Heegan… (Kulanka Ciidanka oo galabta ka dhacaya garoonka Eng Yariisow)
Haaruun February 24, 2020
(Muqdisho) 24 Feb 2020. Kulanka ugu xiisaha badan Horyaalka Somali Premier League ayaa galabta wuxuu ka dhici doona garoonka Eng Yariisow Stadium ee dhaca Degmada Cabdicasiis ee Gobolka Banaadir.
Ciyaartan ayaa dhaxmari doonto kooxaha Horseed iyo Heegan waana kulanka loogu magac daray (Derby Army), ama kulanka Ciidanka, Kooxda Horseed waxay matasha Ciidanka xoogga dalka, halka Heegan ay sumad u tahay Ciidanka Booliska, sidaa darteed ayaa loogu magac daray kulanka Ciidanka.
Labadan kooxood ayaa diyaar garoow xooggan u galay ciyaartan weyn, waana kulankii ugu dambeeyay ay ka dheelan wajiga hore horyaalka Somali Premier League ee fasal ciyaareedkan.
Afartii kulan ee ugu dambeyay labadan kooxod Horseed iyo Heegan isku arkan horyaalka Somali Premier League waxaa labo ka mid ah badisay naadiga Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ee Heegan halka labada kulan kale ay barbaro ku kala baxeen labada dhinac, taas oo ka dhigan in Horseed laga itaal roon yahay marka loo eego afartii kulan ee ugu dambeeyay horyaalka ay isku arkan.
Kooxda kubadda cagta Heegan kulankii ugu dambeeyay waxa ay 2-1 ugu soo adkaatay naadiga Rajo Football Club.
Wiilasha Heegan kulanka galabta waxaa ka maqnaan doona xidigaha kala ah Abuna iyo Feysam oo u dhashay dalka Uganda kuwaas oo ku seegaya kaarar digniinta oo u uruuray.
Heegan sanadkana bandhig wacan aye ku jirta waxeyna leedhahay 14-dhibcood oo horyaalka ah.
Naadiga Horseed kulankii ugu dambeyay waxey 1-0 ugu soo taqlustay wiilasha Midnimo, waxeyna leeyihiin 15-dhibcood oo horyaalka ah.
Labadan kooxod ayaa ciyaar isla xisbaatan dheeli doona maadama hal dhibcood oo qura u dhaxeyso Horseed ayaa leh 15 dhibcood, halka heegan ay leedhahay 14 dhibcood, wuxuuna kulankan noqonaya mid labada dhinac ay iska ilaaliyan inuu khasaaro la kulmo.
Tartanka: Somali Premier League
Kooxaha: Horseed vs Heegan
Garoonka: Eng yariisow Stadium
Saacadda: 3:30 Galabnimo xilliga geeska Afrika
W/D: Cabdifitaax Nani
Samuel Eto'o oo doortay kan fiican Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi, inkastoo uu jawaabo is-gafsan bixiyey!
RASMI: Liiska 21-ka xiddig ee Barcelona uga qeyb gali doona kulanka Napoli ee Champions League oo la shaaciyey & Saxiixooda cusub ee Braithwaite oo lagu daray